လမ်းသရဲ ပလာတာ – Thet Nandar
လမ်းသရဲ ခေါက်မုန့် လေး စားပီးတော့ လမ်းသရဲ ပလာတာလည်း အဲဒီလို အရသာမျိုးပါပဲ။ ဂေါ်ဖီ၊ ပဲပင်ပေါက်၊ မုန်လာဥနီ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အားလုံးကို ပါးပါး လှီးပီး မဆလာနဲ့ ဆားနဲ့ ကျော်ထားတဲ့ မုန့် မျိုးမို့ ကိုယ့် ဘာသာ ကိုယ် စီးတီးမတ်က china town တံဆိပ် ready made ပလာတာ ၀ယ်ပီး လုပ်စားလို့ ရပေမယ့် ဒီနေ့ စီးတီးမတ်မှာ ဈေးဝယ်ပီး အပြန် ပလာတာ တွန်းလှည်းလေး တွေ့တာနဲ့ လမ်းသရဲ ပလာတာ ခေါ် ကီးမားပလာတာ နဲ့ ကလေးတွေ အတွက် ကြက်ဥပလာတာ သကြားပါတော့ ချိုတယ်။ အဖေက ညစာ ထမင်းစားပီးရင်တော့ ဘာမှ ထပ်မစားတတ်ဘူး။ အသီးအနှံ လောက်ပဲ စားတတ်တာမို့ အဖေအတွက် မ၀ယ်တော့ဘူး။ ပလာတာ ၂ ချပ်ကို ၉၅၀ ကျပ်။
November 9, 2009 Thet Nandar
2 thoughts on “လမ်းသရဲ ပလာတာ”
အဟိ… အခုပဲ ပလာတာ လုပ်နည်းတွေ အင်တာနက်ထဲ လျှောက်ကြည့်နေတာ အမရေ.. ဒီကို မလာလည်ခင်လေး.. ရေခဲရိုက်ပြီးသား ပလာတာကို ပါကစ်စတန် ဟာလာဆိုင်မှာ ၀ယ်လို့ရတယ်ပြောတယ်.. သွားရမှာ ဝေးတာကြောင့် မ၀ယ်ဖြစ်ဘူး.. အမပြောတဲ့ လမ်းသရဲပလာတာတော့ မစားဖူးဘူး.. ကြက်ဥ ပလာတာတော့ စားချင်တယ်.. ရိုးရိုးပလာတာကိုလည်း သကြားဖြူးပြီးစားချင်တယ်.. yummy!!!
အဲဒီမှာ Ready made ပလာတာတွေ မရဘူးလား။ ဒီက city mart မှာတော့ စင်ကာပူက ထုတ်တဲ့ ပလာတာတွေ ၀ယ်လို့ ရတယ်။
ပလာတာကတော့ အမျိုးမျိုး လုပ်စားလို့ ကောင်းတာချည်းပဲနော်။